Intuthuko yomphakathi: umqondo, nenqubo kanye nemiphumela
Yenhloso ekuthuthukisweni kwamasevisi akwi-yonke imikhakha impucuko womuntu kuchazwa njengoba intuthuko emphakathini. Umqondo, imfuno yale nqubo Ziningi ukutolika. Umlando uyazi izindlela eziningi ezihamba phambili okushesha njengokungena gxuma, futhi ukuziphendukela kwemvelo okuqhubekayo.
izici Jikelele nekwehlukahlukana kutenhlalo
Ngakho, umqondo intuthuko kwezenhlalo kanye nenqubo yayo kuchazwa ngokuthi bonke labo lokho kuthuthukisa izimo ezibangela inqubo ekuphumeni othakazelisayo Ukulungiswa kwesakhiwo kanye sesimanje. Ikhaya isizinda, isisekelo sayo - kuyinto inguquko kwezesayensi nakwezobuchwepheshe futhi ushintsho olukhulu ukwazi komphakathi ngaphansi kwethonya izimfundiso ezintsha futhi nokuhlalisana kwabantu. Ukungafani leli qiniso akusho Nokho uvumele incazelo ocacile, ngokuvumelana ukukhulelwa kaMarx, umthombo oyinhloko intuthuko kwezenhlalo - indlela zokukhiqiza impahla nokusatshalaliswa izimpahla. isigaba Lower ebugqilini ngemihelo yakhe ophoqelelwe, futhi phezulu kukhona umphakathi inhlalakahle (socialism). intuthuko yomphakathi: umqondo, nenqubo ye-inqubo ifilosofi ovulekile ayaqaphela degree of inkululeko kwezomnotho nakwezombusazwe. Lesi sakamuva uqinisekisa isimo.
intuthuko yomphakathi: umqondo, imfuno
Kunezinhlobo eziningana imicabango yabantu onegunya kakhulu phezu sesimanje nenqubo, futhi iphambene ngokuphelele. Ngesisekelo abacwaningi abaningi baba uhlobo isikali yamanani, futhi ine umehluko okuqinile. Ngakho, umphakathi wobushiqela, ukukhiqizwa impahla ngokushesha ukuthuthukisa ke ngesikhathi esifanayo lamalungelo nenkululeko yomuntu kanye isakhamuzi kukhona ezingeni sasivumela ongaphakeme, yisibonelo esikhazimulayo lokhu postulate ongakhonza njengoba lamaKhomanisi kweSoviet Union naseJalimane lobuNazi. Ngokungangabazeki, ukuthuthukiswa komphakathi kanye intuthuko kwezenhlalo eduze kuyasebenzisana,, kubonakala, umqondo umugqa owodwa, kodwa intuthuko - ukhadinali, singasho, ushintsho wamavukelambuso emphakathini, kanti ukuthuthukiswa - inqubo yokuziphendukela kwemvelo, okungukuthi, Ngasekelwa. Ngakho, kwelinye intuthuko shazi ingaze, ngezinye yahlanjalazwa. Nokho, kuzo zonke lezi zindlela kukhona subjective futhi banelilungelo khona.
Ukuphikisana nasebunyeni umphakathi ekuthuthukiseni
Manje ukugxila umqondo njengokuhlosa nokumila ziyaphikisana futhi intuthuko emphakathini. Umqondo, nenqubo ye-mkhuba uyabonakala ngempela edidayo. Uma sithatha isici esiyinhloko yentuthuko yezenhlalakahle, kuvela ukuthi ushintsho kumiswa asiphumeleli ekukhuliseni amabutho ithele njalo, futhi ngenxa yalokho lesi sivivinyo ilahlekelwa Eqondisayo yayo amagugu. Kodwa bezikhali uhlelo olusha lungaphezu esiphakeme kunaleso ubudala, ngakho-ke, kwathatha isikhathi eside ngaphambi kokuba kubuse izimpawu liphuma.
Uqinisile kuphakama ukuphikisana efanayo, futhi mhlawumbe isici ngaphezulu uqhathanisa ne-capitalism ne-ndawonye. Ngempela, ekuqaleni yesibili mode zokukhiqiza akazange kuphakama ezweni kakhulu athuthukile kwezomnotho, kodwa nokuqaliswa kwalo uye wakuvumela ukuba ukungena ezinhlwini zamaphayona abaholi ukukhiqizwa Imininingwane emhlabeni. Lezi ukuphikisana uzoqhubeka ukuthonya isiqondiso jikelele ekuthuthukiseni uhlelo umphakathi, ngakho indlela zokukhiqiza uhlala esilinganisweni esitebeleni abaningi abakholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo emphakathini.
"Athlete" - belungiselela utamatisi izithombo (isithombe)
Indlela ugcwalise uhlelo Ukushisa owawusemzini womzalwane: amathiphu namasu